bat နဲ့ administrator password ကိုပြောင်းလဲခြင်း [Tips & Tricks]
Myanmar IT Resource Forum » PROGRAMMERS ZONE » » Batch File Programming » bat နဲ့ administrator password ကိုပြောင်းလဲခြင်း [Tips & Tricks]
1 bat နဲ့ administrator password ကိုပြောင်းလဲခြင်း [Tips & Tricks] on 16th July 2009, 5:59 am
Title GAF Administrator Password Changer!
set /p Password=what did you want to make your pass?
အခု အပေါ် က code ကလေးကို notepad ထဲမှာ ကူးပြီးတော့ .bat နဲ့ save လိုက်ပါ .... username နဲ့ password နေရာမှာ တော့ ကိုယ်ကြိုက်တာလေးကိုထည့်ကြည့်ပါ... ပြီးရင်တော့ run လိုက်ပေါ့ ...
အဆင်ပြေပါစေ ... စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦး .........
2 Re: bat နဲ့ administrator password ကိုပြောင်းလဲခြင်း [Tips & Tricks] on 16th July 2009, 9:10 pm
Thanks alot My brother.....
3 Re: bat နဲ့ administrator password ကိုပြောင်းလဲခြင်း [Tips & Tricks] on 26th October 2009, 3:15 pm
4 Re: bat နဲ့ administrator password ကိုပြောင်းလဲခြင်း [Tips & Tricks] on 6th December 2009, 2:59 pm
သူက တစ်ခါတည်း Admin acc အသစ်တစ်ခုကို တန်းဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့ပုံပဲ။ အဲဒီလိုလားမသိဘူး ???
အင်တာနက်ဆိုင်ကနေ စမ်းရတော့ သိပ်တော့ အဆင်မပြေဘူး။
5 Re: bat နဲ့ administrator password ကိုပြောင်းလဲခြင်း [Tips & Tricks] on 6th December 2009, 6:05 pm
6 Re: bat နဲ့ administrator password ကိုပြောင်းလဲခြင်း [Tips & Tricks] on 6th December 2009, 7:59 pm
7 Re: bat နဲ့ administrator password ကိုပြောင်းလဲခြင်း [Tips & Tricks] on 2nd May 2010, 2:06 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 37
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 45
အစ်ကိုရေ မရဘူးဗျ။ [You must be registered and logged in to see this image.]
user name က တော့ note pad ထဲမှာ တခါတည်းပြောင်းပြီးရိုက်လိုက်တယ်။
Password ကကျတော့ note pad ထဲမှာတခါတည်းပြောင်းရျမှာလား [You must be registered and logged in to see this image.] ၊ command prompt ထဲကျမှကြိုက်တဲ့ password ရိုက်ရမှာလား။ [You must be registered and logged in to see this image.]
ကျွန်တော် အမျိုးမျိူးပြောင်းလုပ်ကြည့် ပြီးပြီ
တစ်ခါတလေ denied ဖြစ်တဲ့ခါဖြစ်၊ တစ်ခါတလေ complete ဖြစ်ပေမဲ့ ဘာမှမပေါ်လာဘူး။
8 Re: bat နဲ့ administrator password ကိုပြောင်းလဲခြင်း [Tips & Tricks] on 2nd May 2010, 5:47 pm
9 Re: bat နဲ့ administrator password ကိုပြောင်းလဲခြင်း [Tips & Tricks] on 31st July 2010, 9:12 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-04-02
I used this code. Unfortunately, I can't open my account in my computer. I can't use my old and new password. Please help me. How to crack my administer account. I use Window XP. There isaimportant file for my job in "My Document" folder. So I can't format my Hardisk. Now, I use the internet with another computer. Please help me.... [You must be registered and logged in to see this image.]
10 Re: bat နဲ့ administrator password ကိုပြောင်းလဲခြင်း [Tips & Tricks] on 1st August 2010, 8:28 pm
i think your password is
what did you want to make your pass?
because you use above code
11 Re: bat နဲ့ administrator password ကိုပြောင်းလဲခြင်း [Tips & Tricks] on 14th July 2011, 3:18 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2011-01-21
အစ်ကိုရယ် /p က ဘာဆိုလိုတာလည်းမသိဘူး တစ်ချက်ရှင်းပြပေးပါလား
12 Re: bat နဲ့ administrator password ကိုပြောင်းလဲခြင်း [Tips & Tricks]